တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျး နိုငျငံတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ Victory Day of Great Patriotic War (၇၅) နှဈမွောကျ အထိမျးအမှတျစဈရေးပွ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျရနျထှကျခှာ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျ သော မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျ ရေးဝနျကွီး Army General Sergei Kuzhugetovich Shoigu ၏ဖိတျကွားခကျြအရ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ Great Patriotic War (1941-1945) အောငျနိုငျမှု (၇၅)နှဈမွောကျအထိမျးအမှတျ စဈရေးပွ အခမျးအနားသို့တကျရောကျရနျ အတှကျယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ အပွညျပွညျဆိုငျရာမွနျမာလကွေောငျး(MAI)မှ အထူးလယောဉျဖွငျ့ နပွေညျတျော တပျမတျောလဆေိပျမှ ထှကျခှာသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့အား ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး) တပျမတျောအရာရှိကွီး မြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျး နိုငျငံသံရုံးမှ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Nikolay A. Listopadov ၊ စဈသံမှူး Colonel Eduard OKLADNIKOV နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျ၌ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွ သညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား လိုကျပါသှားကွကွောငျးနှငျ့ COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှု ကွောငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသို့ ပွနျလညျထှကျခှာရနျအခကျအခဲ ဖွဈပျေါနသေညျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသံရုံးမှ မိသားစုဝငျ ၁၉ ဦးကိုလညျး တဈပါ တညျးချေါဆောငျသှားခဲ့သညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Victory Day of Great Patriotic War (၇၅) နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန်ထွက်ခွာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင် သော မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီး Army General Sergei Kuzhugetovich Shoigu ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Great Patriotic War (1941-1945) အောင်နိုင်မှု (၇၅)နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ် စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရန် အတွက်ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်း(MAI)မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် နေပြည်တော် တပ်မတော်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း) တပ်မတော်အရာရှိကြီး များ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nikolay A. Listopadov ၊ စစ်သံမှူး Colonel Eduard OKLADNIKOV နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြ သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ လိုက်ပါသွားကြကြောင်းနှင့် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကြောင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံရုံးမှ မိသားစုဝင် ၁၉ ဦးကိုလည်း တစ်ပါ တည်းခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။